एउटा यस्तो देश, जहाँ मोटी युवतीलाई स्वर्ग छ ! – Saurahaonline.com
एउटा यस्तो देश, जहाँ मोटी युवतीलाई स्वर्ग छ !
एजेन्सी, भदौ ८ । मरिसस यस्तो देश हो, जहाँ बिहेका लागि युवती सुन्दर र शिक्षित भएर मात्रै पुग्दैन, उत्तिकै वजनदार पनि हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यस देशमा मोटो ज्यानका युवती बिहे गर्ने पुरुषका लागि पहिलो रोजाइमा पर्ने गर्छन् ।
त्यही भएर पनि होला– उक्त देशका मोटी युवती धेरै खुसी र सुखी छन् । उक्त देशमा युवतीहरूको शरीरमा मासु र बोसो लागेन भने ठूलो चिन्ताको विषय हुन्छ । त्यहाँ फिट रहने र स्लिम शरीर बनाउने कुरा कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन ।
जब कुनै युवती दुब्ली छ भने परिवारले उनलाई मोटो हुने काइदा सिकाउँछन् । उनीहरूको खानामा जोड दिइन्छ । त्यस देशमा यस्तो चलन छ, परिवारका छोराहरूलाई पनि बिहे गर्दा मोटा र ज्यान परेका केटी खोज्न भनिन्छ । यदि कोही केटी दुब्ली र पातली भए उसको बिहे नहुने खतरा हुन्छ ।
त्यस देशमा यस्तो बुझाइ छ कि, मोटी दुलही घरकी सुहाग हुन् । त्यस्ता बेहुलीले घरलाई सम्पन्न र सुखी बनाउँछिन् भन्ने आममान्यता हुन्छ । यसै कारण पनि त्यहाँका अभिभावक आफ्ना छोरीहरूलाई सकेसम्म धेरै खान र मोटाउन दबाब दिन्छन् ।
प्रायः मोटा युवतीलाई ज्यान घटाउन र स्लिम बन्न भ्याइनभ्याइ हुन्छ भने मरिससमा भने युवतीलाई काम नगर तर टन्न खाएर मोटाऊ भन्ने चलन छ । भएन त गज्जब !
मोटो ज्यान भए घरमा सबैको प्यारो, बिहे गरेर गएपछि झन् प्यारो । कस्तो अचम्मको चलन !